I-Hawksworth Cottage-iNdawo yaseGrassington Village
Uziphekela kwi-cottage ecocekileyo entliziyweni yeGrassington Village. Ipropathi isandula ukwenziwa yangoku, ibonelela ngazo zonke izinto ozifunayo ukuze uhlale kamnandi. Ipropathi ikwaxhamla kwisitshisi seenkuni, iWi-fi kunye neyadi ebiyelweyo ngasemva. Kukwakho nenzuzo yokupaka ezitalatweni ngokuthe ngqo phambi kwepropathi (ngokusekwe kwindawo yokuqala enikezelweyo).
Ezantsi, le ndlu inegumbi lokuhlala elitofotofo elinendawo yokuhlala abantu abane kwaye inendawo yomlilo erhangqe ilitye elinesitshisi sokhuni. Kukwakho nendawo yokutyela yeendwendwe ezine. Ikhitshi elincinci, elixhotyiswe kakuhle ngasemva kwepropathi enokufikelela kwiyadi ebiyelwe ngasemva. Le ndlu yangasese iluncedo kumgangatho osezantsi weWC.
Kumgangatho ongaphezulu, lo mhlaba unamagumbi okulala amabini (ubukhulu benkosi enkulu kunye negumbi leBunk elineebhedi ezilingana nabantu abadala). Kukwakho nendlu yokuhlambela enkulu efikelelekayo nge-Master Bedroom.
Iyadi evaliweyo ngasemva kwendlu yangasese ixhamla kwipatio ebanzi enefenitshala yegadi. (Nceda uqaphele, ngelixa iyadi isetyenziselwa kuphela abahlali beNkosana yase-Hawksworth, abahlali abadityanisiweyo banelungelo lokufikelela kumhlaba lowo, omnye uvumelekile ukuba axhome iwashing ngamaxesha athile).
Ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho ndiya kufumaneka kunxibelelwano ngefowuni, umbhalo kunye ne-imeyile.